Juventus Oo Noqotay Kooxda Fursada Ugu Badan U Haysata Saxiixa Neymar %
Juventus Oo Noqotay Kooxda Fursada Ugu Badan U Haysata Saxiixa Neymar
By Ramzi Yare	 On Aug 20, 2019
Kooxda Juventus ayaa lagu soo warramayaa inay markaliya si lama filaan ah usoo xoojisay wararkii la xiriirinayay xiddiga kooxda PSG ee ee Neymar JR kaas oo ay hore saxeexiisa ugu tartamayeen kooxaha Barcelona iyo Real Madrid.
Kooxaha horyaalka Spain ayaa guud ahaan suuqa xagaagan oo dhan doonayay saxeexa Neymar balse Paris ayaan marnaba aqbalin dalabaadkooda waxaana haatan markeeda ciyaaraysa Juventus oo isku dayaysa haddii ay saxeexan samayn karto.
Faa’idada ugu weyn ee ay qabto kooxda kusoo guuleysatay Serie A ayaa ah in haatan Barcelona iyo Real Madrid ay u muuqdaan kuwo qaboojinaya xiisihii ay u qabeen 27 jirkan kaddib markii ay ku adkaatay inay heshiis dhaqaale ahaan ula gaadhaan PSG.
Faah-Faahinta heshiiska ay Bianconeri ku doonayso Neymar ayaan ahayn mid ka wanaagsan kuwii ay ku meel mari waayeen Barca iyo Madrid waxaana sida lagu xusay wargeyska AS ay Neymar ku doonayaan Paulo Dybala oo lagu daray 100 Milyan.
Haddii aan si cad isku dul taago heshiiskaas ayaa ah 222 Milyan ee ay Paris doonayso waxaana uu isku noqonayaa 180 Milyan maadaama Paulo lagu qiimeeyo 80 Milyan.
Waxa kaliya ee ay Juventus ku dagaalamayso ayaa ah inay doonayso inay iska wanaajiso dhinaca Neymar isla markaana ay miiska u saartay mushahar dhan 37 Milyan sanadkii.
Si kastaba ha ahaatee, Waxa ugu weyn ee caawinaya Juventus ayaa ah in PSG ay aad u jeceshahay qaab ciyaareedka Paulo Dybala isla markaana ay si lama filaan ah u aqbali karto dalabka Juventus.
David Luiz ayaa saxaafada uga warramay ciyaartoyga qaybta ka ah kooxdiisa cusub